Mayelana NATHI - Qingdao Yi Xinyan International Trade Co., Ltd.
Iminyaka Engaphezulu Kwengu-20 Yesipiliyoni Kumabhere Namafutha
Shining Industry China, sinezinkampani ezintathu ukuze sikwazi ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezihamba phambili.
Senza ukuthwala nokugcoba imakethe yasekhaya eminyakeni engaphezu kwengu-20.
Ukuletha imikhiqizo esezingeni eliphakeme emhlabeni kuyinjongo yokuphishekela kwethu. Sisungule inkampani yezokuhweba ukuthekelisa imikhiqizo eyinhloko igrisi kanye nokuthwala eQingdao Port.
Qingdao YIXINYAN ukuhweba ngamazwe co., Ltd umkhiqizo BXY, umkhiqizo omkhulu ukuthwala i-pillow block, omunye umkhiqizo ISKHAYA, umkhiqizo oyinhloko igrisi yokugcoba.Qingdao QINGHENG eziveza co., Ltd sha QHW, umkhiqizo oyinhloko amabhere ebhola nama-roller bearings.Qingdao SENZEXIANG ukuhweba kwamazwe omhlaba co., Ltd umkhiqizo SZX , umkhiqizo oyinhloko yisivikelo.
Inkampani yethu isethe ucwaningo nentuthuko, idizayini, ukukhiqizwa njengenye yebhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu, amandla amakhulu wezobuchwepheshe. Le nkampani inemishini yokuhlola ekhethekile futhi esezingeni eliphakeme, umshini wokugaya we-CNC, ukuthwala okuphezulu okuphezulu kwemikhiqizo ngokunemba okuphezulu futhi kubeke isisekelo esiqinile.
Le nkampani inamathela kukhwalithi yempande, inhloso yebhizinisi, yamakhasimende amaningi namadala ukuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, izinhlobo ezaziwayo zokwakha umkhakha wamafutha we-grease. Samukela ngobuqotho osomabhizinisi basekhaya nabangaphandle ukuxoxa ngokubambisana nentuthuko efanayo.
Imikhiqizo yenkampani yami ithengisa ukuthandwa emazweni angaphezu kwama-20, kufaka phakathi iYurophu, iMelika, i-Afrika, i-Southeast Asia namanye amazwe.
Manje imikhiqizo eyinhloko yefektri ingasebenza esikhundleni sokunemba okuphezulu, ukulayishwa okusindayo kwamabhere. Ifektri yethu eLiao Cheng City, yonke ikhwalithi ethwalayo ngokuhambisana ngokuqinile nokuphathwa kohlelo lwekhwalithi ye-ISO9001, enye yenkampani eyinhloko yokuthumela kwamanye amazwe. Manje singahlinzeka ngePillow Block Bearing, Deep Groove Ball Bearing, Spherical Roller Bearing, Tapered Roller Bearing, Cylindrical Roller Bearing, Thrust Ball Bearing neminye imikhiqizo yokukhiqiza kanye nokusetshenziswa. Uphawu lokuhweba olubhalisiwe lwenkampani "BXY", "FXY", "QHW" "SKYN" ingxenye yalo ithathe indawo yemikhiqizo yokungenisa. Imikhiqizo isetshenziswa kabanzi ngemishini yokunemba okuphezulu, izigayo zensimbi, izimayini zamalahle, ukuphakamisa, insimu kawoyela, amandla omoya, izimoto, iphepha nezinye izimboni, wonke amakhasimende ami amasha namadala anentshisekelo ngemikhiqizo yethu.
Sisebenza futhi kuwo wonke amabhizinisi ohlobo lwamafutha afana ne-calcium base grease, i-lithium base grease eyinkimbinkimbi, izinga lokushisa lamafutha okushisa aphezulu njalonjalo. Lonke ithimba lethu, liphethe iqembu lonjiniyela abanolwazi olunothile ekuthuthukisweni kwemikhiqizo ephethiloli, zama ukuthola inqubo yemishini yokushayisana kwemishini nokusebenza kwezentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nensizakalo yokuthambisa imikhiqizo yochungechunge, kuhloswe ngokunikeza amakhasimende imikhiqizo yokuthambisa yobungcweti kanye izixazululo ezihlelekile nokunikeza insizakalo kumakhasimende ezimbonini ezingaphezu kwezingu-120 ukwenza imishini yamakhasimende ingabangi kakhulu futhi igcobe kakhulu!
Izinzuzo Ezinkulu Zokuncintisana
· Sineminyaka engaphezu kwengu-10 yesipiliyoni sobungcweti njengomkhiqizi wamafutha okugcoba.
· Senza iphakethe njengedizayini yakho noma amasampula akho ngokugcwele.
· Sineqembu elinamandla lokucwaninga nokuthuthukisa ukuxazulula izinkinga zegrisi.
· Baningi abahlinzeki bezinto ezingavuthiwe ezungeze imboni yethu, sabambisana iminyaka eminingi.
Ama-oda wesivivinyo amancane angamukelwa, isampula yamahhala iyatholakala.
· Intengo yethu inengqondo futhi igcina ikhwalithi ephezulu kuwo wonke amaklayenti.
Yamukela i-oda lokuhlolwa elincane
Ukupakisha Kwedizayini Yamahhala
· Isampula Iyatholakala
Ikhono lokucwaninga nentuthuko
Umthamo Omkhulu Wokukhiqiza
Ukubambisana Kwesikhathi Eside
Singabantu ngokukhethekile ngenhloso yokubambisana kabili yokuwina, kungukukhetha kokuqala, ukuthi ulawule inzuzo esiyiphikelela ngekhwalithi, singumhlinzeki wakho othembekile, sigcizelele insizakalo, ukukhetha kuqala kwakho ukuthi uzimisele ukubambisana kwesikhathi eside, Ithimba lethu linezifiso eziphakeme kakhulu
asibona abalingani bebhizinisi kuphela, siyakwazisa ukuhlangana, ngakho-ke sinesibopho sokugcina ubudlelwano obuhle.Sigcizelela ukuthi "Yenza ibhizinisi elisezingeni eliphezulu, uxoxisane ngentengo eguqukayo." Kuze kube manje, ukuphishekela kwethu izinhloso kuheha abalingani bebhizinisi abaningi abanomqondo ofanayo.